Schauinsland Reisen dia mitantana orinasa fiaramanidina miaraka amin'ny Airxelerate
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Alemana » Schauinsland Reisen dia mitantana orinasa fiaramanidina miaraka amin'ny Airxelerate
Vaovao Mafana Alemana • Hostpost • Vaovao • teknolojia • Tsiambaratelo momba ny dia • Vaovao isan-karazany
Airxelerate dia natsangana tany Berlin tamin'ny taona 2018. Ankoatry ny famolavolana ny vokatra Calisto azy manokana, namoaka vahaolana IT namboarina manokana ho an'ireo orinasam-pizahan-tany ihany koa ilay orinasa.
Ilay mpandraharaha alemanina Schauinsland Reisen dia mampiasa ny Calisto Distribution Airxelerate ho fizarana tsena.
Amin'ny ho avy, ity rafitra vaovao ity dia hanohana ny fitantanana ireo vondron-tseranan'ny mpandeha lavitra ary hanome antoka fa azo zaraina amin'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahan-tany ny tolotra sidina.
Schauinsland Reisen dia manitatra ny fotodrafitrasa informatika misy azy amin'ny sehatra fizarana Calisto avy amin'ny Airxelerate. Amin'ny ho avy, ny rafitra vaovao dia hifehezana ireo zotram-piaramanidina marobe ateraky ny mpandraharaha fizahan-tany ary hiantoka ny fizarana ny sidina amin'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny fizahan-tany.
Schauinsland Reisen dia manantena fa ny rafitra dia hanamora ny fanaraha-maso ny sidina. “Schauinsland Reisen miasa akaiky sy atokisana amin'ireo kaompaniam-pitaterana an'habakabaka manerana an'izao tontolo izao. Fiaramanidina ahafahantsika mitantana an'io serivisy isan-karazany io amin'ny fomba feno sy mavitrika, "hoy i Markus Förster, Lehiben'ny fizarana sidina ao Schauinsland Reisen.
Ny Calisto Distribution Platform dia namboarina tamin'ny fepetra takian'ny orinasan-tsambo fialan-tsasatra mahazatra, nefa miaraka amin'izay dia manamboatra tetezana ara-teknika amin'ireo zotram-piaramanidina manerantany izy io. Ny Calisto Distribution Platform dia ahafahan'ny zotram-piaramanidina sy mpikirakira fizahan-tany manodina mandeha ho azy ny lisitry ny anarana ao anaty rafi-serivisy henjana ny pasipaoro sy ny rafitra fanaraha-maso ny fiaingany.
“Ny zotram-pialan-tsasatra sy zotram-piaramanidina voakasa dia mampiasa sary miavaka amin'ny rafitra samihafa. Airxelerate dia manaparitaka ny fetra ara-teknika amin'ny fomba tena kendrena ary miantoka ny fizotran-tarehy mitovy amin'ny varotra fiaramanidina amin'ny fizahan-tany, "hoy i Nina Sifi, Tale mpitantana ny Airxelerate. Schauinsland Reisen no mpandraharaha fitsangatsanganana voalohany nampiasa ny rafitra fanaraha-maso sy varotra mifototra amin'ny rahona nampidirina tamin'ny taona lasa.
Airxelerate dia natsangana tany Berlin tamin'ny taona 2018. Ankoatry ny famolavolana ny vokatra Calisto azy manokana, namoaka vahaolana IT namboarina manokana ho an'ireo orinasam-pizahan-tany ihany koa ilay orinasa. Airxelerate dia mandresy ny fetra ara-teknika misy eo amin'ny seranam-piaramanidina sy ny fizahantany ary fahaizana mitantana ny angon-drakitra sy ny varotra.
Miaraka amin'ireo rafitra mailaka sy haitao maoderina, ny vahaolana mifototra amin'ny rahona an'ny Airxelerate dia mampihena ny fahasarotana sy ny vidiny. Miorina amin'ny fahaizana am-polony taona maro, ireo mpanorina ny fanombohana Berlin dia mamaky làlana vaovao amin'ny teknolojia fitsangatsanganana.
Vaovao misimisy kokoa avy any Alemana kitiho eto.